Imithi yabantu | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Imithi yabantu
Yini ewusizo, nokuthi ngabe physalis iyingozi
Abaningi baye bazwa ngesimo esinjalo njenge-physalis. Amabhokisi abomvu angavamile, izibani, lapho izithelo zesitshalo zifihla khona - into yokuqala oyikhumbulayo. lapho bekhuluma ngo-Physalis. Kungokomndeni we-nightshade. Lesi sitshalo esingapheli sifinyelela ku-50-100 cm ukuphakama, sikhiqiza izimbali ezingafani ezikhenkethi noma umbala omhlophe, okhula kusuka kuma-axils amaqabunga futhi ziyaqhakaza ngo-Agasti.
Iyini ukusetshenziswa kwe-digitalis empilweni yomuntu?
I-Digitalis (Digitális) ingotshani lomndeni we-plantain. Ukusakazwa eMedithera, kutholakala e-Asia naseNyakatho Afrika. Ukwakhiwa kwamakhemikhali we-digitalis Ukwakhiwa kwe-digitalis kunezinsalela zezinhlanganisela eziphilayo, ezihlanganisa ama-carbohydrate ukwakha i-glycosides. Lesi sitshalo sinamakhemikhali ayisihlanu: i-digitoxigenin, i-gitoksigenin, i-gitloksigenin, i-digoxigenin ne-diginigenin.
Imithi yokwelapha ye-plectrantus enomusa: ukusetshenziswa emithi yendabuko kanye nokuphikisana
I-Plekrantrantus enomsindo (i-sporiferous, i-mint) iyimifino engapheli yomndeni wakwa-Yasnotkovyh. E-Russia, bevela eNingizimu Afrika, futhi basakazwa e-Australia. I-Plektranthus enomsoco: Ukuhlanganiswa kwezimpawu Phakathi kwezinxenye zesitshalo, ama-glycosides, amaprotheni, ama-carbohydrate ngisho nama-alkaloids angahlukaniswa.
Izakhiwo zokuphulukisa ama-clove, kunesitshalo esiwusizo esiwusizo
Abaningi bethu bajwayele ama-clove njengenkathi ephunga elimnandi. Kodwa-ke, bambalwa abantu abakwaziyo ngemithi yokwelapha ye-spice, okuyiziqu ezivaliwe ezingavuthiwe zomuthi we-clove, ezifana nokuma okuncane okuqoshiwe ngama-caps. Kuvela ukuthi imithi emazweni amaningi esikhathini esidlule yamukele ukusetshenziswa kwe-clove ngezinhloso zokwelapha.
Ukwakhiwa kwamakhemikhali nokusetshenziswa kwe-oregano
I-Oregano iyisitshalo esihlala isikhathi eside esihlala emhlabeni wonke. Ukwanda kwawo kuhlanganisa ama-glades, amahlathi, amahlathi nezindawo ezinotshani. Ezimweni eziningi, i-oregano iyalinywa ngenhloso yokuqhubeka nokusebenza ngezici ezihlukahlukene. Ngokuhambisana nesidingo salesi sitshalo, ukungazitholi kwayo, kuhluke ezinhlobonhlobo zamakhemikhali ngendlela enhle ye-symbiosis yezinto eziwusizo.
I-Potentilla emhlophe: izakhiwo eziwusizo, ukusetshenziswa nokuphikisana
I-Potentilla emhlophe yisitshalo esingavamile. Itholakala kuphela endle. Lesi sitshalo singomndeni wakwaRosy, uhlobo lwePotentilla. Kubantu kuthiwa i-pyatipalnik, i-pyatipal, i-pyatipe udonga. Imifino engapheli I-Potentilla ikhula ngokuphakama kusuka ku-8 kuya ku-25 cm. Impande iyancipha, umbala omnyama omnyama.
Iyini i-parsley ewusizo, ukwakheka nokuphulukisa izitshalo zalesi sitshalo?
I-Parsley iyisitshalo esincane se-biennial esilungu lomndeni wakwa-Umbrella. Isiko sinamafutha amhlophe noma aphuzi okwesibhakabhaka namaqabunga amabili noma amathathu alandelayo. I-parsley yasekhaya ibhekwa njengogwini lwaseMedithera. Iparsley iyanda kulo lonke elaseYurophu, ngaphandle kweScandinavia.
Ukusetshenziswa kwe-horseradish: izinzuzo kanye nokulimala empilweni
I-Horseradish - ihlala isikhathi eside ngesimpande esinamandla, esidliwa njenge-seasoning esiphundu. I-Horseradish isitshalo esithandwayo segadi, amaqabunga ayo asetshenziselwa ukulondolozwa nokukhiqiza imikhiqizo ebusika. Sebenzisa isitshalo kanye nezinhloso zokwelapha. Ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye nekhalori horseradish Yiziphi amavithamini azigcini nje kuphela ezitholakala ku-horseradish!
Imikhiqizo yemilingo yamakhowe amhlophe
I-Ceps mhlawumbe iyisisulu esithandekayo kakhulu sabathengi abaningi be-mushroom. Kungabizwa ngokufanele ngokuthi inkosi yama-mushroom, ngoba ibonakaliswa nje ngokubukeka kwayo okukhangayo, kodwa futhi ngezimfanelo zayo eziphakeme kakhulu, okwenza kube isithako esihle sezitsha eziningi. Ngaphezu kwalokho, i-fungus emhlophe ibonakala ngezindawo eziningi eziwusizo, okuzoxoxwa ngezansi.
Amahlathi e-Coniferous asetshenzwa kithi ngenkathi yehlobo le-mushroom ye-autumn njengesipho ngendlela yamakhowe amahle - ibhotela. Ziyakuthandwa kakhulu ngabathandi be "ukuzingela okuthulile" kokunambitheka kwabo okuhle nokuvunwa okuhle. Ama-mushroom ama-mushroom Maslyata athola igama lawo ngenxa yekhanda elinamafutha.
Yini ewusizo kumuntu omnyama we-cumin, ukusetshenziswa kwe-cumin namafutha alo emithi yendabuko
Imifino ebabayo iqukethe ama-esters nezinye izinto ezinomsindo. Sikunikeza i-cumin emnyama. I-cumin ebomvu iyisitshalo se-biennial isambulela, izakhiwo zayo ezizuzisayo zingenamkhawulo, nakuba kunezingqinamba zokusebenzisa. Izakhi zokwelapha ze-cumin black ziyaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. Uyazi?
Ukwakheka okuwusizo nokuphulukisa izindawo ze-chervil
I-Chervil yaziwa ngezikhathi zethu kusukela ezikhathini zasendulo futhi yayibiza ngokuthi iyadla, i-karbel, i-kupyr. Kwakusetshenziswe ekudleni futhi njengendlela yokulungisa. Namuhla, lesi sitshalo siqhubeka sisetshenziselwa imithi yendabuko nokupheka, kodwa izindawo zayo ezizuzisayo zithole uhlelo lokusebenza kwezinye izindawo zokuphila komuntu. I-Chervil (kupyr): ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye nenani lokudla okunomsoco we-Chervil isitshalo njalo kubonakala phakathi kwezinye izitshalo.
Izakhiwo zokwelapha kanye nokuphikisana kwe-sage (salvia) nutmeg
I-Sage iyi-herb eyaziwa kakhulu ngenxa yezinto zayo zokwelapha kusukela ezikhathini zasendulo. UHippocrates wakhuluma ngezinto zakhe eziwusizo emibhalweni yakhe. Akulondolozwe umuthi we-sage nomuthi wanamuhla. Izitshalo ezivela kulezi zitshalo zelapha izinqubo zokuvuvukala zesikhumba kanye nomzila wokuphefumula. E-cosmetology, isetshenziswa kakhulu njenge-agent elwa nokuvuvukala nokuqina.
Izinzuzo zamakhambi zokwelapha: izakhi zokwelapha ze-sage kanye nokuphikisana
Igama le-sage plant in Latin lizwakala njengo salvia "salvere", okusho ukuthi - ukuba nempilo. Omkhulu uHippocrates wakhuluma ngo-salvia ngokuhlonipha "utshani obungcwele," futhi amaGreki asendulo athi insimu isitshalo esinqoba ukufa. I-Salvia (inhlakanipho) inezinhlobo eziningi, futhi akulula ukuhlukanisa ukuthi yiyiphi inhlakanipho eyimithi.
Izakhiwo zokwelapha ze-Chokeberry nokuphikisana
I-Aronia i-black-fruited, iphinde ibe nombala omnyama we-mountain ash - i-shrub noma isihlahla esinamajikijolo anomnandi omuncu, okuwusizo kakhulu ezindaweni zayo. Ukuphakama okubanzi kweChernoplodka, naphezu kwezakhiwo zayo eziwusizo ezinhle, kwakusanda kufushane, eminyakeni engaba ngu-100 edlule, futhi ukhokha lesi sitshalo kumbeleki omkhulu waseRussia u-Ivan Michurin.
Izakhiwo eziwusizo ezibomvu ze-Rowan nokuphikisana
I-red rowan, izinzuzo zayo zezempilo, ukuphikisana nokulimala okungenzeka kusuka ekusebenziseni kwayo kuye kwaziwa isintu iminyaka eyizinkulungwane eziningana. Izimfanelo eziyingqayizivele zomlotha wezintaba zamnikeza indawo ekhethekile emithi yokwelapha, ukupheka ne-cosmetology. Olubomvu uRowan uyaqhubeka nokuheha futhi ajabulele ukuthandwa okukhulu.
Izakhiwo eziwusizo nezingozi zelamula
I-Lemon - isitshalo se-Citrus yenhlobo. Kungenzeka ukuthi yabonakala ngenxa yokuhlunga okuzenzekelayo, futhi isikhathi eside sakhula njengezinhlobo ezihlukene, futhi kuphela lapho kusetshenziselwa khona futhi kwaphenduka isiko esivamile sensimu (eNingizimu noma eningizimu-mpumalanga ye-Asia). Namuhla lesi sitshalo asiziwa esimweni esivusa isivuno.
Ukuphulukisa izakhiwo zobusi lwe-ithanga, indlela yokusebenzisa nokugcina uju kusuka ehlathini
Inyosi yamangulu, eyayiziwa isikhathi eside ngezindawo zayo ezizuzisayo, ingenye yezimfihlo ze-long-livers zeCaucasus. Waba uhlobo lwezithombe zempilo namandla. Namuhla, abantu abaningi babuyela eziyisisekelo, besebenzisa lo mkhiqizo wokuphulukisa. Uyazi? E-US, uju lwamathanga ngokuvamile luthisa ama-popcorn kanye nama-cocktails.
I-Ledum ishiya ama-marsh: ukusetshenziswa, izidakamizwa kanye nokuphikisana
Itiye leMarr Labrador - isitshalo esiphezulu esinamahlumela esihlahleni esiyingozi emndenini we-heather. I-Ledum ikhula kakhulu eYurophu, eNyakatho Melika nase-Asia. Lesi sitshalo sinesakhiwo esiqinile samahlathi futhi sifinyelela ukuphakama okungamaphesenti angu-120. Iphunga lezintaba zaseRomsemary zasendle lifana kakhulu nephunga le-camphor.
Iyini i-laurel ewusizo: ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye nezakhiwo zokwelapha zeqabunga le-bay
Ekhishini ngalinye kukhona isikhwama semifino eyomile. Isikhathi esiyaziwa kahle sinamacala amaningi kakhulu wezinhlelo zokusebenza. Iqabunga le-Bay linemithi ewusizo futhi lingasiza ekubhekaneni nezifo nezinkinga zezimonyo, kodwa ngokusetshenziswa okunjalo kuyadingeka ukucabangela ukuphikisana.